192.168.8.1 - Ikhasi 8 kwezingu-8 - Ukungena ngemvume Admin
192.168.8.10 Ikheli le-IP ikheli le-IP elikhethekile. Amakheli we-IP akhethekile ngaphakathi asetshenziswa njenge Inethiwekhi yendawo yasendaweni ye-LAN (LAN) futhi azikaze zibonwe ku-inthanethi. Amakheli we-IP akhethekile achazwe ku-RFC 4193 (IPv6) naku-RFC 1918 (IPv4).
192.168.8.10 iyi-IP ekhethekile egcinelwe ukubuyisa iphaneli yomlawuli yama-routers. Lokhu namanye ama-IP anjenge 192.168.8.200, 192.168.0.35, 192.168.8.1, njll zamukelwa ngazwilinye amazinga womhlaba wonke we-router IPs. Ezincwadini, ibizwa nangokuthi "i-Default Gateway IP". Akuwona ama-routers wonke umuntu afanayo. Futhi, kukhona ukwehluka phakathi kwamamodeli ahlukahlukene amafemu afanayo. Lawa mafemu njenge-IP yokungena ngemvume asebenzisa i-192.168.8.10.
Ikheli le-IP ochungechungeni 192.168.8.1 - 192.168.8.255. Leli banga lekheli elisetshenziswa kumanethiwekhi asekhaya i-router izohlukanisa kuwo wonke amadivayisi (i-laptop, i-pad, i-Home PC, iselula, njll.) Nge-othomathikhi yenethiwekhi yendawo.
The http://192.168.8.10 Ikheli le-IP libhaliswe yi-IANA Internet Assigned Numbers Authority njengengxenye yenethiwekhi ekhethekile engu-192.168.8.0/24. Amakheli e-IP esikhaleni esikhethekile awabelwe noma iyiphi inhlangano futhi noma imuphi umuntu angasebenzisa lawa makheli we-IP ngaphandle kokuvunyelwa irejista ye-Intanethi yendawo njengoba ibizwa yi-RFC 1918, hhayi njengamakheli e-IP omphakathi.
192.168.8.1 - 192.168.8.255 Uhla lwe-IP lapho i-IP isigaba salo lububanzi be-IP obukhethekile obuqinisekisa amazinga abekwe yi-RFC 1918. Amakheli anjenge 192.168.8.10 azemukelwa kwi-Intanethi yomphakathi. Uma inethiwekhi yomuntu siqu idinga ukuxhuma ne-inthanethi, kufanele isebenzise njengesango noma iseva elibamba.
Igama lomsebenzisi nephasiwedi
Okusemile admin admin
Okusemile admin (akekho)
Okusemile admin iphasiwedi
I-MediaLink admin admin
I-MediaLink admin (akekho)
I-MediaLink admin iphasiwedi
Kungani amakheli afana no-192.168.8.10 ejwayelekile kakhulu?
Njengoba kwazisiwe, i 192.168.8.10 Ikheli le-IP liyingxenye yenethiwekhi yomuntu siqu yekilasi C. Uchungechunge lwalezi zinethiwekhi ngu 192.168.0.0 - 192.168.255.255. Lokhu kwenza amakheli amaningi e-IP okungenzeka abe ngu-65,535. Lesi sandiso sivame ukusetshenziswa kumanethiwekhi omuntu njengoba ama-routers amaningi aklanywa nge-192.168.8.1, 192.168.1.1 or 192.168.0.1, njengekheli labo lokuzenzakalelayo.
Uma uxhuma kule nethiwekhi ngocingo lwakho, noma i-laptop, ithebhulethi, uthola ikheli le-IP njenge 192.168.8.10 ukulesi simo.
I-router ngayinye iyatholakala ngesiphequluli. Bhala http://192.168.8.10 esipheqululini uma kunekheli le-router IP 192.168.8.10.
Uzothola ikhasi lewebhu lokungena ngemvume. Amaphasiwedi & amagama wabasebenzisi asetshenziswa kakhulu yi-admin engu- “1234” noma i- “none”. Sicela uhlole amarekhodi akho omzila.
Uma ikheli le-IP lingeyona i-router yakho ye-IP, ungabuyisa i-IP router ngomyalo Ipconfig.
Ukungena ekhasini lakho le-admin ungasebenzisa ikhasi lakho le-admin ngokubhala 192.168.8.10 kubha yekheli lesiphequluli sakho sewebhu futhi ungaqinisekisa iphasiwedi yokungena ngemvume.
Izigaba ama-router Shiya amazwana
← Previous ikhasi1 ... ikhasi7 ikhasi8
Uhlu Lokuzenzakalelayo Lwe-router
Uhlu Lwamakheli we-Ip
2wire router Ngemvume
3Com router Ngemvume
3JTech router Ngemvume
Ukungena ngemvume kuka-Arris Router
Ukungena ngemvume kwe-Asus Router
Ukungena kwe-Belkin Router
Ukungena kweBuffalo Router
Ukungena ngemvume kweCisco Router
Comtrend umzila Ngemvume
Ukungena ngemvume kwe-D-link Router
Ukungena ngemvume kwe-Linksys Router
Ukungena ngemvume kweNetgear Router
Ukungena ngemvume kwe-TP-Link Router
TRENDnet router Ngemvume
Ukungena ngemvume kwe-ZyXEL Router
© 2022 192.168.8.1 • Yakhiwe nge GeneratePress